Ikhomishini kaZondo ifuna uZuma adonse iminyaka emibili ejele
OWAYENGUMENGAMELI wakuleli uMnuz Jacob Zuma obuyela eNkantolo eNkulu eMgungundlovu ngoLwesibili. Isithombe: Felix Dlangamandla
Mcebo Mpungose | February 22, 2021
IKHOMISHINI ephenya ngokulawulwa koMbuso yidlanzana isiphakamise ukuthi ifuna aboshwe iminyaka emibili lowo owayengumengameli wakuleli uMnuz Jacob Zuma ngokushaya indiva umyalelo wenkantolo yoMthethosisekelo.
Emaphepheni awafake enkantolo, usihlalo wale khomishini uJaji Raymond Zondo ucele ukuthi uZuma agwetshwe iminyaka emibili ngecala lokudelela inkantolo. Lokhu kulandela ukunqaba kukaZuma ukuvela kwikhomishini kaZondo ngesonto eledlule nakuba ayesekhishelwe amasamanisi.
UZondo, ofuna icala likaZuma liqulwe ngokushesha, uthe ukungaveli kwakhe kwikhomishini ngeledlule ngokunjalo nokuhluleka kwakhe ukuphendula ezinye izicelo zenkantolo yikho okumenza afune atholwe enecala lokudelela inkantolo.
UZondo uthe ufisa ungqongqoshe wamaPhoyisa uMnuz Bheki Cele noKhomishana wamaphoyisa uGeneral Khehla Sitole baqinisekise ukuthi uyalandelwa umyalelo wenkantolo ngokuboshwa kukaZuma.
Encwadini ayishicilela ngoFebhruwari 1 nonyaka uZuma waveza ukuthi akakwesabi ukuboshwa ememezela ukuthi ngeke esalubeka kwikhomishini kaZondo.
Ngaphandle kokungqubuzana nekhomishini uZuma kusasa kulindeleke ukuthi abuyele enkantolo enkulu eMgungundlovu ngamacala enkohlakalo.
UZuma uzovela enkantolo ehambisana nabamele iThales, edayisa izikhali nokusolwa ukuthi yayimgwazela.